WARBIXIN RASMI AH: QM, IGAD & Daneeyaasha Soomaaliya oo ka shaqeynaya Heshiis Afar qodob ka kooban in laga hirgaliyo Tukaraq, Maxaase ka og tahay? – Puntlandtimes
WARBIXIN RASMI AH: QM, IGAD & Daneeyaasha Soomaaliya oo ka shaqeynaya Heshiis Afar qodob ka kooban in laga hirgaliyo Tukaraq, Maxaase ka og tahay?
July 29, 2018 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com oo si dhaw ula socda dhaqdhaqaaqyo ay garwadeen ka yihiin wadamada Urur gobaleedka IGAD, Mareykanka, Midowga Africa, Midowga Yurub, UK & Qaramada Midowbay oo lagu doonayo in lagu baajiyo dagaal dambe oo ka dhaca gobalka Sool, oo ay isku hayaan maamulada Puntland iyo Somaliland, ayaa hadda waxay wadaan dadaalkoodii ugu dambeeyey.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Amuuraha Soomaaliya Micheal Keating ayaa todobaadkii hore tagay Garoowe, wuxuu la kulmay Madaxweynaha Puntland & Isimadda mandiqadaas, gaar ahaana kuwa kasoo jeeda gobalka xiisaduhu ka jiraan oo uu kala hadlay sida loogu baahan yahay in la baajiyo dagaal dhaca.
Ergaygu wuxuu u sheegay madaxda Puntland & Isimadda dhaqankaba in aan loo baahneyn dagaal dhaca, balse loo baahan yahay in lahirgaliyo qodobadii ay horey dhinacyadu iskugu soo qaadeen oo u muuqda kuwa hoos loogu dhigi karro xiisadda taagan.
Laakiin warsidaha Puntlandtimes wuxuu ogaaday in aysan waxba natiijo wanaagsan ah kasoo bixin kulamadaas oo ka dhacay Garoowe, isla markaasna Isimada dhaqanka ee Beesha Dhulbahante oo deegaanadooda lagu dagaalamayo ay cadeeyeen in ay katirsan yihiin Puntland, Nabaduna ku imaan karto ciidamada Somaliland oo ka baxa gobalka Sool.
Mar kale Beesha Caalamka ayaa u dirtay Garoowe & Hargeysa wafuud ay ku jiraan Madaxa Urur Gobaleedka IGAD ee Soomaaliya qaabilsan Maxamed Guuye iyo Kuxigeenka Siyaasada ee Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay, waxaana aad looga hadlay qorshaha ku saabsan sidii dagaal loo baajin lahaa.
Ergada IGAD & Qaramada Midowbay waxay u bandhigeen Isimadda Gobalada Puntland afar qodob oo ku saabsan in lagu joojin karro colaadda Tukaraq, laakiin jawaabta ay heleen ayaa la mid noqotay midii ay horey Isimaddu u siiyeen Ergaygii gaarka ah ee Xoghayaha guud u qaabilsanaa Soomaaliya.
Madaxa IGAD ee Soomaaliya Maxamed Guuye oo ka hadlayay maanta Hargeysa wuxuu sheegay in ay doonayaan in lahirgaliyo afar qodob oo uu sheegay in ay saldhig u noqon karaan baajinta dagaal dambe oo dhaca, si gaar ahna wuxuu u soo qaaday qodobada ay isla soo qadeen dhinacyadii ay kulmeen ee xiisaddan la xariirtay.
Qodobada ay doonayaan Daneeyaasha Ammaanka Soomaaliya in la hirgaliyo ayaa kala ah.
In xabadda la joojiyo, ciidamadana la kala qaado
In la abuuro jawi wada hadal oo ay isku arki karaan Taliyaasha ciidamada Puntland & Somaliland.
In Maxaabiista lays dhaafsado, haddii ay suuragal tahay
In Gargaarka Aadanaha la ogolaado, si gurmad loo siiyo Shacabka Barakacay 7 bilood ee lasoo dhaafay.
In arrimaha xaduudaha ee laysku hayo lagu soo qaado Wada hadalada dhexmari doona Somaliland & Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Qodobka u dambeeya ayaa ah mid soo jeedintiisu ka timi dhinaca Somaliland, laakiin dhanka Puntland waxay gabi ahaanba diideen dadaalo la xariira in la baajiyo dagaalkaas, waxayna sheegeen in uu ku baaqan karro oo kaliya maamulka Hargeysa oo ciidamadiisa ka saara gobalkaas.
Dadaalka xooga badan ee ay wadaan daneeyaasha Soomaaliya ee Caalamku, wuxuu muujinayaan in cadaadis xoog badan ay gali doonaan arrintan, waxayna ogaatay Puntlandtimes.com in wafdiga Caalamka oo fara badan ay tagi doonaan Garoowe 16-ka August 2018, xiligaas oo ay doonayaan in dagaal oo dhan lasoo afjaro oo aan la qaadin wax weerar ah.
GAAS markuu reer Pl dhaafo 4 bil ka dib insha Allah ayaa wadanka la xoreynayaa wuxuuna Gaas ku dhici doonta FULAYOOW GUULI KUU DHOWAYDAA, intuu galgalanayo muu iska cadeeyo warkiisa.
Gaas waligiis waxaa uu ahaa nin dan kalaha dawlada federalka si uu ugu meel gaaro Puntland. Laakiin Gaas waxaa kuu sheegayaa Puntland ma ahan meel lagu dul tago Muqdishu. Gaas waa ninkii Dabadhilifka u ahaa xasan culusoow oo siiyay lacag uu kasoo xaday Puntland $4,000,000. Nasiib darro isaga iyo saaxiibkiisa Culusoow diyaradii ayaa la dhacedy, Farmaajo oo aan la fileynin ayaa garaacay.
Shacabka Puntland ha ogaadeen meesha ee wax ka quruntay waa:
1. Gaas oo tuug ah, beenaale ah, fulay ah u adeegana galmudug iy muqdishu.
2. Baarlamaanka Puntland oo ah tuugo uu gaas lacag laaluush uga keno Dubai.
3. Wasiirada gaas oo dhamaan ubada uneducated qaarkooda Taxi driver ahaan jiray dhulalka qurbaha.
4. Isiimada Puntland 20% oo nqdey kuwo caada qaatayaal ah oo gaas laaluush baray. inta afartaa shay taagan tahay Puntland ma hagaagayso.
Dhibkaan waxaa loga bixi karaa:
1. Doorasho xalaal ah in la doorto ruux u adeega Puntland kana hormariya dawlada federalka.
2. Geesia h, oo aan tuug iyo beenaale toona ahayn.
3. Waa inuu wadan Passprt dhul shisheeya.
4. Waa inuu ka bixin puntland waligii.
5. Wa inuu diin lee yahay, yahay nin xalaal quudato ah.
6. Waa inuu dhisaa dhaqaalaha puntland iyo ciidankaba soo xiraana xuduudaha puntland.
7. Waa inuu habeen iyo maalin utaagan yahay difaaca puntland iyo amniga puntland.
8. Waa inuusan xiriir la lahayn dubai, xabashi iyo cadoowga soomali.
intaa hadduu lee yahay ruuxa halagu bedelo ninkaan ku naaxay xaaraanta uu ka xadaay shacabka puntland ee aan socon karin.